Mararin’ny Covid-19: mbola manao fitiliana indroa miantoana | NewsMada
Mararin’ny Covid-19: mbola manao fitiliana indroa miantoana
Raisina an-tanana eny amin’ny hopitaly avokoa ireo marary voatily fa mitondra ny tsimokaretina Covid-19 na ahitana soritraretina na tsia. Mihinana ny fanafody fitsaboana ny tsimo­karetina daholo izy ireo. Ankoatra izay, ho an’ireo efa manana aretina mitaiza ka mihinana fanafody isan’andro, anjaran’ny mpitsabo no mandanjalanja ny tsy hisian’ny fifanoherana amin’ny fanafody. Manao fitiliana sy fitarafana manokana koa ny dokotera rehefa ilaina izany, hoy ny fanazavan’ny sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka, Solofomalala Duval Gaetan, omaly, teny amin’ny CCO Ivato.
Momba ireo olona manaraka fitsaboana, manao fitiliana atao indroa miantoana ary mielanelana roa andro izany, rehefa tsy ahitana ny tsimokaretina ny fitiliana voalohany sy ny faharoa vao azo ambara fa sitrana tanteraka ilay marary ary tsy mitondra ny tsimokaretina intsony. Hatreto aloha, mbola ao anatin’ny fitsaboana tanteraka ny tomponandraikitra.
Nohazavainy koa fa lazaina fa tranga ahina ny olona iray ahitana ny soritraretina ka nifampikasoka tamin’ny olona mitondra ny Covid-19 tao anatin’ny 24 ora nialoha ny nisehoan’ilay soritraretina (mikohaka, be lelo, marary tenda, manavy mihotra ny 38°C ny hafanana).